အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း လူ ၇၀၀၀၀ ကျော်ကူးစက်၊ စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၃ သန်းကျော်ပြီ… – သတင်းထူး – Thadin Htoo
အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း လူ ၇၀၀၀၀ ကျော်ကူးစက်၊ စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၃ သန်းကျော်ပြီ…
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၇၀၀၆၈ ဦးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါက်းမှာ ၃၀၄၄၉၄၀ ဦးခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ သက်သာပျောက်ကင်းသူ ၂၂၈၀၅၆၆ ဦးရှိလာကာ၊ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်းမှာ ၅၆၈၄၆ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်…
TOPSHOT – Frontline COVID-19 coronavirus warriors such as health workers, patients ambulance drivers, crematorium workers, wearing Personal Protective Equipment (PPE) suits hold Indian national flags as part of the Independence Day celebrations in Kolkata on August 15, 2020. – India’s Prime Minister Narendra Modi issuedanew warning to China over deadly border tensions on August 15, using his most important speech of the year to promise to buildastronger military. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းမှာ လွန်စွာမြန်ဆန်နေခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူတို့အနေဖြင့် အထူးကြိုးစား ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နေရကြောင်းသိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း နေ့စဉ် အတည်ပြုလူနာသစ်တွေ့ရှိမှုမှာ ခြောက်သောင်းခွဲအထက်များသာဖြစ်ခဲ့ရာမှ ယမန်နေ့က အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် အာဖရိကပုံပြင်တွေကို ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးပေးနေသူ…